Maitiro ekurongedza manhamba erabha pamushini? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Maitiro ekurongedza manhamba erabha pamushini?
Rainboow Loom Colored Rubber Netting mumakore achangopfuura akawana mukurumbira.
Iyi yekuisira inokwezva vanhu vemazera akasiyana, sezvo inobvumira mari diki yekudyara zvakasarudzika zvinhu zvipfupi munguva pfupi, kubva pamaketani akakosha, mabhatani, mhete, nyaya dzefoni, kumabhegi, kumusoro uye kupfeka.
PaYouTube, kune akawanda mavhidhiyo ekudzidzira pakusuka kubva kumatanda enjeru, uye kunyange akapatsanurwa nzira anogadzirwa kuti atarise rudzi urwu rwekusika, semuenzaniso:
Mvura Inodziya Matanda. Zvidzidzo zvevhidhiyo;
We kusuka kubva kumarara.
Iwe unogona kuruka zvinhu zvakasiyana paminwe yako, pane forogo uye pamishini.
Ini ndinopa zano pazasi kuti uzive nezveamwe mavhidhiyo tutorials ayo anorondedzera zvakadzama nzira yekusuka mamwe manhamba pamushini:
kubva kumatanda erubhi unogona kurongedza zvinhu zvakawanda zvinonakidza, kubva pane zviri nyore masaga kusvika kumhuka dzakasiyana siyana neverengeki. asi kana iwe uchinge uchitanga usayedze kutanga nezvidhori sezvo zvakaoma uye iwe unogona kuvhiringidzika kutanga nematangi madiki. pazasi ini ndichapa vhidhiyo tenzi makirasi maunogona kuruka zvinonakidza manhamba.
Kuti ugadzire manhamba akasiyana siyana uye zvishandiso (zvishongo) kubva kune akakosha mavara erudzi rwebhandi, unofanirwa kutakura pamaseti akakosha, ongororo yacho inogona kuwanikwa pano:
Tevere, iwe uchafanirwa kugona matekiniki uye kushandisa tenzi makirasi, ayo akawanda pane netiweki (semuenzaniso, pano), uyezve, uine ruzivo rwakakwana, unogona kugadzira yako yega, copyright quot; masterpiecesquot ;.
Kubva pamavara eRobboow Loom elastic mabhandi iwe unogona kuruka huwandu hwakakura hwekushongedza kwakasiyana, zvishandiso uye nhamba.
Mienzaniso yemashopu ekusuka mhuka manhamba:
Owls (inodakadza, chaizvo kwete pamushini)
Iwe unogona zvakare kuruka nhamba yemichero yakasiyana:
Ice cream ne Cherry:
Nekubatsira kwemabhendi erabha uye muchina wakasarudzika, zvinobva zvaita weti dzakasiyana dzinonakidza dzemhuka dzakasiyana uye maruva.
Kuitwa izvi kunoonekwa sei kubva kune dzakawanda vhidhiyo zvidzidzo zviripo paInternet.
Ndakafarira vhidhiyo yekuti ungagadzira sei nyoka:
Kuti uruke chero huwandu kubva kumamu unoda muchina. Mukuwedzera, iwe unoda iyo Rainbow Loom rabara mabhandi ivo pachavo. Maitiro ekuita muchero wega wega, mhuka, murume anofanirwa kutariswa ega, semuenzaniso kubva mumavhidhiyo mafirimu. Hechino chimwe chazvo: tinotarisa maitiro ekuita octopus pane yakajairwa manera muchina:
Zvinhu zvinonakidza kwazvo zvinhu zvidiki zvinouya kubva kumabhuru erudzi rwebhura. Izvi zvekutamba hazvibatsiri chete, asiwo zvinonakidza kuita.
Iwe unogona zvakare kugadzira zvipo zvidiki kune vaunodzidza navo kana vasikana.
Hechino vhidhiyo yekuti ungagadzira sei sakura keychain:
Munguva pfupi yapfuura mwanasikana wangu akatanga kufarira kusuka masheji kubva kumatare erudzi rwebhuruu. Uye zvinoitika kuti munhu anogona kusheka kwete chete mabhurukwa kubva kwavari, asiwo dzakasiyana siyana matoyi. Ndiwo marudzi ese emhando dzemhuka, varume, miriwo nemichero, uye zvimwe zvinhu.
Kuasunga ivo kuri nyore zvakanyanya pamushini.
Hechino vhidhiyo yemamwe mashopu ekusuka zviyero izvi:
Kusuka kwezvinhu zvinonakidza kubva kuRainbow Loom rabha mabhendi kwapinda mufashoni, chinhu chakareruka chinogona kugadzirwa kubva kumabhandi enhema ndechekusungira rongo rakanaka, asi harina kutikodzera? Isu tinoda kuita chinhu chisina kujairika runako. Uye iwe unogona kuita zvinhu zvakawanda, kubva pashiri isiri nyore, sezvandataura, kumatoyi akazara akagadzirwa akazara. Uye mienzaniso inogona kuonekwa mumavhidhiyo anotevera eYouTube:
Iwe unogona kufunga nezve dzakawanda dzakasiyana sarudzo dzinosuka kubva kune elastic mabhandi, uye kunyangwe kana paine muchina.
Hanzvadzi yangu ichangobva kugadzira ruva, mumaonero angu yaive ye violet. Zvakaitika zvakanaka kwazvo.
Rairo rese raive muvhidhiyo iyi:
Mibvunzo ye62 mu database yakagadzirwa mu 0,315 masekondi.